Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Network Engineering » Network အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
1 Network အကြောင်းသိကောင်းစရာများ on 17th May 2009, 10:57 am
ဒါက ကျနေ်ာသူငယ်ချင်း ကိုချိန်ခွင့်ရဲ့ ပိုစ်တစ်ခုပါ
ဒီနေရာမှာ အထွေထွေ network ဗဟုသုတလေးတွေ ၊ အခြေခံလေးတွေကို
ဝေမျှကြပါခင်ဗျာ ။ begineer နားလည်လွယ်လောက်တဲ့ 
အသေးစိတ်ရေးသားချက်လေးတွေနဲ့ရေးသားသွားပါ့မယ် ။ အဲလိုပြောလိုက်လို့ 
အထင်တော့ မကြီးနဲ့ နော် ။ ကျွန်တော်လဲ လေ့လာဆဲ begineer ပါပဲ [You must be registered and logged in to see this image.]
ကဲ.....ကျွန်တော်သိသလောက်လေးနဲ့စပြီဗျာ ။
1 . Local Area Network (LAN)
2 . Metropolitan Area Network (MAN)
3 . Wide Area Network (WAN)
1 . local area network
ကွန်ယက်ငယ်လေးပါ ။ အများဆုံး 1024 ပါဝင်ပြီး 900m အထိပဲ ချိတ်ဆက်နိုင်တယ် ။
2.-့MAN က metropoliton town တွေ city ragne အတွင်းပဲ backbone နဲ့ မချိတ်ထားတဲ့ဟာ ကို Man လို့ ခေါ်တာ ၊
2 . Wide Area Network (WAN)
ကမ္ဘာတ၀န်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ခြင်းပါပဲ ။ Internet ဟာ wan ပါပဲ ။
Network Medium ကြားခံဆက်သွယ်ပေးမည့် ပစ္စည်းများ
1 . ကွန်ပျုတာတစ်လုံးနှင့် တစ်လုံးကို ကြားခံချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ ပစ္စည်းကိုပြောတာပါ။network cable
ကြိုးတွေဟာ ကြားခံပစ္စည်းတွေပါ ။Metallic Cable ဆိုတဲ့tv antenna ကြိုးတွေနဲ့ 
Twisted Pair Cableလို့ ခေါ်တဲ့ဖုံးကြိုးတွေပါ ။ wireless ဆိုတာကတော့ကြိုးမဲ့ စနစ်ပါ ။
2 . Network Interface Card
သို့Network Card တွေ Network ကြိုးတွေ Network ခေါင်းစတဲ့Network
Medium တွေကို သုံးပြီး Data တွေကိုသယ်ယူကြတာပါ ။
2 Re: Network အကြောင်းသိကောင်းစရာများ on 17th May 2009, 8:18 pm
Transmission Control Protocol/Internet Protocol ကိုရဲ့အတိုကောက်ပါ ။ ခေတ်မီ networking applications တွေမှာ စက်တခုမှတခုသို့data တွေသယ်ယူရာမှာ ခေတ်မီတဲ့လုပ်နည်းကိုင်နည်းလိုအပ်ပါတယ် ။
networking ကိုလေ့လာနိုင်သော site
Last edited by N@Y Y!N3 on 7th November 2009, 8:11 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : လင့်တွင် ကုဒ် ခံခြင်း)
3 Re: Network အကြောင်းသိကောင်းစရာများ on 6th June 2009, 8:04 pm
4 Re: Network အကြောင်းသိကောင်းစရာများ on 6th June 2009, 9:06 pm
[You must be registered and logged in to see this link.] ကဏ္ဍမှာ......
Networking နဲ့ ဆိုင်တဲ့ E-Books စာအုပ်လေးတွေရှိပါတယ်ဗျာ
Last edited by N@Y Y!N3 on 7th November 2009, 8:12 pm; edited2times in total (Reason for editing : လင့်တွင် ကုဒ် ခံခြင်း)
5 Network နှင့်ပတ်သတ်၍... on 19th June 2009, 2:24 pm
တခုခြင်းပြန်ရှင်းရမယ်ဆိုရင် ... Network Card ကတော. အရင်တုံးက သုံးတဲ. 10Mbs Speed ရတဲ. နက်ဝက်ကဒ်တွေပါ ။ အခုအသုံးမရှိသလောက်ကိုဖြစ်နေပါပြီ ။
RJ45 ခေါင်း နဲ. 100Mbs / 1Gbs Speed အထိအထောက်အကူပေးနိုင်ပါတယ် ။ လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ. နက်ဝက်ကဒ်တွေဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီနက်ဝက်ကဒ်ကို ပို.ဆောင်ဆက်သွယ်ပေးမဲ. ကြိုးကတော. RJ45 Male တပ်ထားတဲ. ကြိုး ဖြစ်ပြီး ကြိုးအမျှည်ပေါင်း ၈ကြိုး ပါဝင်ပါတယ်။ ကြိုး ထိုးတဲ.နေရာမှာတော.
A Type (ဖြူမော်/မော်/ဖြူစိမ်း/ပြာ/ဖြူပြာ/စိမ်း/ဖြူညို/ညို) နဲ.
B Type (ဖြူစိမ်း /စိမ်း /ဖြူမော် /ပြာ / ဖြူပြာ/မော် /ဖြူညို / ညို) ဆိုပြီး ၂မျိုး ၂စားရှိပါတယ် ။
6 Re: Network အကြောင်းသိကောင်းစရာများ on 19th June 2009, 2:32 pm
တရားကတော. ဖြန်.ဖူးပေးမဲ.အလုပ်နဲ. လမ်းညွှန်ပေးတဲ.အလုပ်ကိုပဲလုပ်ကိုင်မှာပါ
။ ဥပမာ ပေးရရင် ... ရပ်ကွက် မြေပုံ တခုလိုပေါ့ အိမ်နံပါတ်ဘယ်လောက် ၊
ဘယ်လောက်ကို လာတဲ့ဧည့်သည် က ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ရှာပြီး သွားလို့ရအောင်
ပြထားတဲ့သဘော မှာပဲလုပ်ကိုင်ပါတယ် ။
Router ကတော့ Switch နဲ့ကွာခြားချက်တွေရှိပါတယ် ။ သူ့မှာ Function တွေပိုစုံလင်ပြီး သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ ၊ တခြား စက်တလုံးဖြစ်စေ ၊ နက်ဝက် တခုကိုဖြစ်စေ သွားရောက်ဖို့အတွက် သက်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ ပြီးတော့ ရောက်ရှိလာတဲ့ နက်ဝက် ရဲ့ Speed ကို ပြန်ပြီး Routing အနေနဲ့ တိုးပေးပါတယ် ။ အဲဒီအတွက် နက်ဝက် ၂ခု ချိတ်ဆက်ရာမှာပိုပြီး လျှင်မြန်စေပါတယ် ။ Wireless router တွေကတော့ ၁၀၀ မီတာ ကနေ ၂၀၀ မီတာ လောက်ကို point to point ကို access လုပ်နိုင်တယ် (ကြားခံ နံရံများ ၊ ပိတ်ဆို့မူများရှိရင်တော့ မိတာ ၁၀၀ က အကောင်းဆုံးပါ ) ။ ဥပမာ ပေးရရင် ... ရပ်ကွက်တခုမှာလာတဲ့ဧည့်သည် ကို အိမ်တိုင်ရာရောက်လိုက်ပို့ပေး သလို ၊ သူ ကိုယ်တိုင် ကို က ရပ်ကွက် တခု တည်ထောင် နိုင် ပါတယ် ၊တခြားရပ်ကွက် က အိမ်ကို ပါ (သတ်မှတ်ပေးထားရင်) သူ လိုက်ပြနိုင် ပါတယ် ။
ဒါဆိုရင် Network Card , Switch , Router တွေရှိတာနဲ. အားလုံးတတ်ဆင် ပြီးတာ နဲ. Network ရသလားဆိုတော. မရနိုင်သေးပါဘူး ။ ကားတစီးကို အားလုံးတတ်ဆင်ပြီးတာ နဲ. ကားက ၀ူးကနဲမထွက်သွားပါဘူး ၊ ကားကို မောင်နှင် နိုင်မဲ့သူရှိမှ အဆင်ပြေမှာပါ ။ အဲအတွက် ကွန်ပြူတာ အချင်းချင်းမှာလဲ နားလည်အောင် လုပ်ကိုင်ပေးမဲ့သူ Protocol ဆိုတာလိုအပ်တယ်။
(၁) TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)
စသဖြင့် Protocol တွေလိုအပ်လာပါတယ် ။ Protocol ဆိုတာက ကွန်ပြူတာတွေ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ရာမှာ လုပ်ဆောင်ကြရမယ် rule တွေလို့ပဲကျနော် သဘောပေါက်ထားပါတယ် ။ ဆော့ဝဲရေးသားထားသူ အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး Protocol အများအပြားရှိနေမှာပါ ။ အခု အသုံးပြုမှုအများဆုံးနဲ့အသုံးဝင်ဆုံး Protocol ကတော့ TCP/IP Protocol ပဲဖြစ်ပါတယ်။
7 Re: Network အကြောင်းသိကောင်းစရာများ on 19th June 2009, 2:40 pm
0001 = ၁ ဖြစ်ပြီး 0010 = ၂ ဖြစ်သွားပါတယ် ။ အလားတူစွာ 0011 = ၃ ဖြစ်သွားပါမယ် ။ အသေးစိတ်လေ.လာချင်ရင်တော. [You must be registered and logged in to see this link.] မှာ လေ.လာနိုင်ပါတယ် ။
အသေးစိတ် လေ.လာချင်ရင် တော. [You must be registered and logged in to see this link.] ဖတ်ရူနိုင်ပါတယ် ။
8 Re: Network အကြောင်းသိကောင်းစရာများ on 19th June 2009, 2:48 pm
တွက်ချက်ချင်ရင်တော. [You must be registered and logged in to see this link.] မှာပါ ။ အသေးစိတ်လေ.လာချင်ရင် တော. [You must be registered and logged in to see this link.] မှာလေ.လာနိုင်ပါတယ် ။
edit ..( [You must be registered and logged in to see this link.] မှာလဲ pdf ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုဆွဲပြီး လေ.လာလို.ရပါတယ် ။
Open Networking စနစ်များအတွက်နည်းပညာ Model တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒီ Open System Internnection (OSI) Reference Model ကို International Organization for Standardization (ISO) က ဥရောပမှာ ၁၉၇၄ခုနှစ်ကတည်းကစတင် Developed လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကနဦးမှာတော့သူဟာ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူး။ အလွှာ(၇)လွှာပါတဲ့ ဒီ OSI Model ဟာ Ethernet တို့ TCP/IP တို့စတဲ့ အမျိုးမျိုးသော Networking Protocol တွေကို Implement လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အထူးသတိပြုဖို့ရှိလာတာကတော့ OSI သည် TCP/IP တို့လို ကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်ပြီးအသုံးပြုရတဲ့ protocol မဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။
Protocol ဆိုတာက ကွန်ပျူတာတွေအပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ကြတဲ့ နေရာမှာတဖက်နှင့်တဖက် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ကြရမယ့် rule တွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။အနည်းငယ်ထပ်အကျယ်ချဲ့ရရင် protocol တစ်ခုဆိုတာသည် ပရိုဂရမ်မာတစ်ယောက် ကနေပြီး function (သို့) function များစွာတို့ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ရေးသားထားတဲ့ set of instruction တွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။အချို့ protocol တွေသည် OS (window XP၊ 2000)နှင့်အတူပါရှိပြီးသားဖြစ်သလို အချို့ကျတော့ software program တွေနှင့်အတူ install လုပ်ရပါမယ်။
ဤတွင်မှဆက်ပြီး OSI model နှင့် protocol တို့ရဲ့ ဆက်နွယ်မှုကိုကြည့် ရအောင်။
အဲ့ဒီ data ပေးပို့မှုဖြစ်စဉ်သည် millisecond အတွင်းပြီးမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက data သွားပုံလမ်းကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး communicate လုပ်ပုံကို logically အရကြည့်မယ်ဆိုရင် layer တူအချင်းချင်းသာ communicate လုပ်ကြပါတယ်။ဆိုရရင် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှ application layer protocol သည် တစ်ဖက် ကွန်ပျူတာ၏ application layer protocol ဖြင့်သာ information တွေဖလှယ်ကြပါတယ်။ အခြား layer protocol များသည် Application layer ၏ data တွေကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ဘို့ရန်မကြိုးစားကြပါဘူး။
9 Re: Network အကြောင်းသိကောင်းစရာများ on 27th September 2009, 11:26 am
STOP! ဆိုတဲ့စာသားအနီရောင်ကြီးကိုမြင်တိုင်း ခင်ဗျားတို့ရော၊ ကျွန်တော်ရော
စိတ်ညစ်သွားကြမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာက အင်တာနက်ကို
လွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးလို့မရတာ အားလုံးအသိပဲ မဟုတ်လား။ ဘန်းထားတဲ့ Site
တွေကို တော်တော်များများ ကျော်တတ်ခွတတ်ကြပါတယ်။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ အဲ..အဲဒီ
ကျော်တဲ့Site တွေကိုပါ ထပ်ဘန်းတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.ဟရို့။
နောက်ခံသီအိုရီလေးအရင်ရှင်းပြပါရစေ။ အခု ခင်ဗျားတို့သိတဲ့ MPT တို့ ၊
BaganNet(အခု MTP) တွေကို ISP လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီ ISP တွေမှာ Server
ကွန်ပျူတာ နှစ်မျိုးထား ရှိပါတယ်။ DNS Server နဲ့ Proxy Server ပါ။ DNS
ကတော့ ဒီ ကျော်တာခွတာနဲ့ မဆိုင်လို့ မပြောတော့ပါဘူး။ အဓိကက Proxy Server
ပါ။ Proxy ကို ဘာသာပြန်ရင် ကိုယ်စားလှယ်လို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဖြင့်
ဘာကိုယ်စားလှယ်လဲ။ ဟုတ်ကဲ့..Website ကိုယ်စားလှယ်ပါ။ ဥပမာ ကျွန်တော်တို့က www.microsoft.com
ကို ၀င်ကြည့်တယ်ဆိုပါတော့။ အဲဒီ Microsoft ဆိုဒ်ကြီးကို
သိမ်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာ တနည်းအားဖြင့် Microsoft Web Server က
သူ့ဆိုဒ်ကြီးကို ကျွန်တော်တို့ဆီလှမ်းပို့ပေးလိုက်မယ်။ စဉ်းစားကြည့်ဗျာ
Microsoft နဲ့ ကျွန်တော်တို့ကအဝေးကြီး။ အရမ်းကြာမှပေါ့မဟုတ် ဘူးလား။
အဲဒီလိုမကြာအောင် ဒီMPT မှာရှိတဲ့ Proxy Server က Microsoft website
ကိုကြိုပြီးယူထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့က Microsoft Website
လိပ်စာရိုက်လိုက်တာနဲ့ အရင်လို Microsoft Web Server ကနေ လှမ်းမယူတော့ပဲ
အဲဒီ Proxy Server က သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ Microsoft Website ကို
ပိတ်တယ်ဆိုတာ ဒီနေရာမှာလာပါပြီ။ ဒီ Proxy Server ဆီ request လုပ်တဲ့
address တွေထဲမှာ သူတို့ပိတ်တဲ့ Site ရဲ့ address လေးပါလာပြီဆိုရင် Proxy
server က ထုတ်မပေးတော့ဘူး။ ကဲ..အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က
ကြည့်မရတော့ဘူးပေါ့။ဒါဖြင့် ဘယ်လိုကျော်မှာလဲ။ လွယ်လွယ်လေးပါ။ MPT က Proxy
Server ကိုမသုံးဘူးပေါ့။ နိုင်ငံခြားက Proxy Server ကိုလှမ်းသုံးမှာပေါ့။
နှစ်နည်းရှိပါတယ်။ တစ်ခုက CGI Proxy သုံးတာ၊ နောက်တစ်ခုက Proxy Switch
Program တွေသုံးပြီး ကျော်တာပါ။ လွယ်တာက CGI Proxy ကလွယ်တာပါ။ CGI Proxy
Website ကိုဖွင့်၊ ကိုယ်ကျော်ချင်တဲ့ Site
ရဲ့လိပ်စာရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပဲ။Google ထဲမှာ CGI Proxy
လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် CGI Proxy Site တွေအများကြီးထွက်လာမှာပါ။
Proxy Switch Program ပါ။ ဥပမာ Your Freedom ပေါ့။ သူကတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း
အားနေတဲ့ Proxy Server တွေကို အလိုလိုရှာပေးတယ်။ ပိတ်ထားတဲ့ Site တွေကို
Auto ကျော်ပေးပါတယ်။ Configuration လုပ်ရတာတော့ နည်းနည်းလက်ဝင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ Connection က နှေးသွားပါတယ်။
10 Re: Network အကြောင်းသိကောင်းစရာများ on 27th September 2009, 11:26 am
Proxy Server ဆိုတာဘာလဲ
Proxy Server ဆိုတာ သင့်ကွန်ပျူတာနဲ့ အင်တာနက်ကြားမှာ တည်ရှိပြီး အင်တာနက်က
ကြည့်တဲ့အခါ အရင်ဆုံး Proxy Server ဆီကို request ရောက်သွားပါတယ်။ Proxy Server က သူ့ဆီမှာ
ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတဲ့ Website ရှိရင် ပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်တာနက်သုံးစွဲရတဲ့သူအဖို့
ပိုပြီးမြန်တဲ့ကောင်းကျိုးကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်က Proxy Server တွေဟာ အဲဒီလို Cache
Anonymous Proxy Server တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ IP ကို ဖျောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်
ကျွန်တော်တို့ဟာ အချက်အလက်ခိုးယူနိုင်တဲ့ Website ကို ကြည့်ရင်တောင်မှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ IP ကို အဲဒီ Site
Free Proxy Server ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ Free ရတယ်၊ လူတိုင်းသုံးလို့ရပါတယ်။
နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ Free Proxy Server များစွာရှိပေမဲ့ တော်တော်များများဟာတော့ Anonymous
Proxy Server တွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။
Proxy ဆိုတာ Server သက်သက်ပါပဲ။ ဘာ Proxy လဲဆိုတာ သိမှ ကိုယ့်အတွက် အသုံးဝင်မှာပါ။
HTTP Proxy ရဲ့ အကူအညီနဲ့ Web Pages တွေ ကြည့်နိုင်မယ်၊ download ဆွဲနိုင်ပါမယ်။
CGI Proxy ဟာ Browser ကနေပဲတစ်ဆင့် access လုပ်နိုင်တဲ့ Proxy Serve ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေ သုံးနေကြတဲ့ ကျော်တဲ့Website ဆိုတာ အဲဒီ CGI Proxy ကိုပြောတာပါပဲ။
တို့တွေမှာ FTP Proxy တွေ ထည့်သုံးလို့ ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက Proxy တွေမှာ FTP Proxy တွေ ရှိပေမဲ့
Public အတွက်တော့ ပိတ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေ FTP သုံးချင်ရင်တော့ နိုင်ငံခြားက FTP
အဓိကကတော့ ကိုယ်ကြည့်နေတဲ့ Site, ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Mail, ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Web Chat တွေက
ကိုယ်ဘယ်ကလဲ ဆိုတာ မသိတော့တာပါပဲ။ အဲဒီတော့ ကိုယ့် information အတွက် လုံခြုံမှုရှိပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အဲဒါက ဖန်တီးပြီးသားပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ် site ပဲကြည့်ကြည့် သူတို့က ကျွန်တော်တို့ IP
သုံးချင်တဲ့ Proxy Server ရဲ့ IP ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တခြားနိုင်ငံက Proxy ကို လှမ်းသုံးဖို့ဆိုတာ အဲဒီလောက်ကြီးထိလည်း မလွယ်ပါဘူး။ (CGI
Proxy တွေကို မဆိုလိုပါ)
(၁) ကိုယ့်နေရာနဲ့ ကိုယ့်သုံးတဲ့ Proxy နဲ့ အရမ်းဝေးနေတဲ့အခါ နှေးတာတွေ၊ ချိတ်ဆတ်မရတာတွေ
(၂) ကိုယ်သုံးတဲ့ Proxy ဟာ ကိုယ်ဟာ မြန်မာပြည်ကမို့ သုံးခွင့်မပေးတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
(၃) တချို့ Proxy Server တွေကတော့ IP နဲ့ ကန့်သတ်ထားတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ကိုယ့် IP က သူတို့ list
11 Re: Network အကြောင်းသိကောင်းစရာများ on 27th September 2009, 11:26 am
Anonymous Proxy Server မှာ ဆိုလိုတဲ့ IP သုံးပြီး ကျနော်တို့ ရဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကို hacking ဟုတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။
ပြုလုပ်တာကတော့ တချို့jave code တွေသုံးတယ်။တချို့ ဆိုဒ်တွေကတော့ iframe တွေမှာ ခိုးယူနိုင်မဲ့ကုတ်တွေ
ထည့်သွင်းအသုံးပြုပြီး ကိုယ့်ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့အချက်အလက်တွေခိုးယူတာပါ။တချို့ ကတော့ အဲလိုခိုးယူနိုင်တဲ့ဆိုဒ်တွေကို
direction လုပ်ပေးတာပါ။ ကိုယ့်ဖွင့်တဲ့ ဆိုဒ်ကတစ်ခု ၊တကယ်ရောက်သွားတော့ တခြားဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့။
proxy ဆိုတာ ကျော်ဖို့ ခွဖို့ နဲ့မဟုတ်တာလုပ်ဖို့ အတွက်ပဲ အသုံးချတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။
မိမိတို့ ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက်လဲ အသုံးချလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒါဟာအင်တာနက်သုံးသူတွေအတွက်
ဒါပေမယ့် အလကားရတဲ့ proxy တွေကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် မိမိတို့ ရဲ့login/password အစရှိတာတွေကို ခိုးယူဖြင်းခံရနိုင်ပါတယ်။
12 Re: Network အကြောင်းသိကောင်းစရာများ on 27th September 2009, 11:27 am
အလကားရတဲ့ proxy တွေစိတ်မချရဘူးဆိုတော့ ပိုက်ဆံပေးရတဲ့ proxy ကကော စိတ်ချရရဲ့ လား။
ဒါလဲမသေချာပါဘူး။ ဘယ်သူမှယုံလို့ မရပါဘူး။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် proxy မသုံးဘဲ ဒီတိုင်းသုံးရင်လဲ
ISP ကလူတွေက ယုံလို့ ရတာမှ မဟုတ်တာ။ ISP ကလူတစ်ယောက်က လူတွေရဲ့အရေးကြီးတဲ့ 
အချက်အလက်တွေ ခိုးယူခြင်းမပြုပါဘူးဆိုပြီး ဘယ်သူမှအာမမခံနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် IT သမားတွေ စိတ်ဓာတ်ကောင်းဖို့ လိုတယ်
ဆိုတာကို အိုင်တီဟောပြောပွဲ ခေါင်းစဉ် အောက်မှာ ပြောခဲ့ရတာပါ။
ဘယ်သူမှယုံလို့ မရဘူးဆိုပေမယ့် ကြောက်နေလဲ ဘာမှကိုသုံးလို့ ရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။
မှန်ကန်တဲ့ ဥပဒေကတော့ သင့်ကို အသင့်အတင့်တော့ အကာအကွယ်ပေးနေမှာပါပဲ။
ဘယ်လို proxy တွေနည်းနည်း စိတ်ချ၇မလဲ။
တရားဝင်အားဖြင့်တော့ ကိုယ်တိုင် https ၀ယ်ပြီး proxy host လုပ်ပြီး သုံးရင်ရပါမယ်။
ဒါမှမဟုတ် ရိုးရိုးproxy host လုပ်လို့ ရတဲ့ free hosting မှာတစ်ယောက်ထဲ password ခံပြီး
proxy script တွေ လုပ်ပြီးသုံးပေါ့ ။
တချို့vpn server /software တွေကလဲ စိတ်ချရတယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။
100 % တော့ ဘာမှစိတ်မချရပါဘူး။
13 Re: Network အကြောင်းသိကောင်းစရာများ on 27th September 2009, 11:27 am
NAT ( Network Address Translation ) ဆိုတာ ဘာလဲ။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သူဟာ ကိုယ့်ရဲ့ Private Internal Network ထဲက Computer တွေကို ISP ကချပေးတဲ့ IP Address တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ Internet Connection အသုံးပြုလို့ရအောင် IP Address တွေနဲ့ TCP/UDP Port No. တွေကို Translation လုပ်ပေးတဲ့ Server တစ်လုံးပါပဲ။
IP Address တွေ TCP/UDP Port No. တွေကို ဘာလို့ Translation လုပ်ပေးရတာလဲ ဘယ်လိုလုပ်ပေးတာလဲ။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ IP Address တွေကို အမျိုးအစားအားဖြင့် နှစ်ပိုင်းခွဲထားပါတယ်။ Global IP Address နဲ့ Local IP Address ဆိုပြီးတော့ပါ။ အဲဒီထဲကမှ Local IP Address ဆိုတာက အသေသတ်မှတ်ပြီးသား ရှိပါတယ်။ Class A အတွက်ဆိုရင် Net ID 10.0.0.0 Subnet Mask 255.0.0.0၊ Class B အတွက်ဆိုရင် Net ID 172.16.0.0 Subnet Mask 255.255.0.0 ၊ Class C အတွက်ဆိုရင် Net ID 192.168.0.0 Subnet Mask 255.255.0.0 ဆိုတာတွေဟာ Local Private IP Address တွေပါလို့ IP Address တွေကို ချမှတ်သတ်မှတ်ပေးနေတဲ့ ICANN အဖွဲ့ကြီးက သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ICANN ဆိုတာ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ကြီးက Internet ပေါ်မှာ IP Address တွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမထပ်အောင် မတိုက်အောင်စနစ်တကျ ထိန်းချုပ်ခန့်ခွဲပေးနေတဲ့ အဖွဲ့ကြီးပါ။
ခုနကပြောခဲ့တဲ့ Local Private Network တွေဟာ Internet နဲ့ တိုက်ရိုက်မချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Network တိုင်းမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ Internet နဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Network တွေမှာတော့ သုံးစွဲခွင့် မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ ICANN က ချမှတ်ထားတာပါ။ ကျန်တဲ့ IP Address တွေကတော့ Global IP Address တွေပါပဲ။ သူတို့ကိုတော့ Internet နဲ့ တိုက်ရိုက်ချိက်ဆက်ထားတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ Computer တိုင်းမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပြဿနာက ရှိလာပါတယ်။ ဘာပြဿနာလဲ။
Internet ပေါ်မှာ IP Address တွေဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု လုံးဝ ထပ်လို့မရပါဘူး။ Unique ဖြစ်ရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ IP Address ဟာ IPv4 (IP version 4) ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ binary (0 and 1) ကိန်းလုံးပေါင်း 32 လုံး (32 bits) နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ Address ပေါင်းက (2Power 32) အရေအတွက် ရပါတယ်။ (အကျယ်တ၀င့်ကိုတော့ IP Address ပိုင်း IP Subnetting ပိုင်းတို့မှာ လေ့လာပေးပါနော်။ ကျွန်တော်ကတော့ ရှည်နေမှာ စိုးလို့ မပြောတော့ဘူး။) ရုတ်တရက် ကြည့်လိုက်ရင် (2 Power 32) ဆိုတော့ ဟာ..အများကြီးလားလို ထင်စရာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနဲ့အသုံးပြုနေကြတာဆိုတော့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ Address တွေက တဖြည်းဖြည်း နည်းပါးလာပါတယ်။ Company ကြီးတွေကလည်း Internet ရဲ့ ကောင်းကျိုးကို သိလာတာနဲ့အမျှ သူတို့ရဲ့ Company အတွင်းမှာ Internet Connection ရအောင် အလျင်အမြန် ကြိုးစားလာကြပါတယ်။ Company ကြီး တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာတင် Company ခွဲပေါင်း ထောင်နဲ့ချီပြီး ရှိနေတတ်ပါတယ်။ သူတိုအားလုံး Internet ကို တိုက်ရိုက်ချိတ်မယ်ဆိုရင် Global IP Address တွေဟာ ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကုန်သွားမှာပေါ့။ ဒါဆိုရင် သူတို့ကို Global IP Address (၄) (၅)ခု လောက်ပေးပြီး အလှည့်နဲ့ Internet ကို သုံးခိုင်းရမှာလား။ ကဲ... ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။
အဲဒီ ပြဿနာကို NAT ဆိုတဲ့ Network Address Translation က ဖြေရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ သူက Local IP Address ကနေ Global IP Address၊ Global IP Address ကနေ Local IP Address အပြန်အလှန် Translation လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က Internet Service Provider လို့ခေါ်တဲ့ ISP ကနေ Global IP Address တစ်ခုကို ယူလိုက်ပါမယ်။ ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ရုံးက Computer တစ်လုံးမှာ NIC( Network) Card နှစ်ကဒ်ဆိုက်ပြီး တစ်ကဒ်ကို အဲဒီ Global IP ပေးလိုက်ပါမယ်။ ပြီးရင် အဲဒီကဒ်ကို Internet နဲ့ ချိတ်ပေးပါမယ်။ ကျန်တဲ့ကဒ်ကိုတော့ Local IP Address တစ်ခု ပေးလိုက်ပါ။ အဲဒီစက်မှာ NAT Service Run လိုက် ပါမယ်။ ဒါဆိုသူက NAT Server ဖြစ်သွားပြီနော်။ ကျန်တဲ့ တစ်ရုံးလုံးက Computer တွေကိုလည်း NAT Server က Local IP Address နဲ့ Subnet တူတဲ့ IP Address တွေ ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ အရေးအကြီးဆုံးက သူတိုရဲ့ Default Gateway နေရာမှာ NAT Server ရဲ့ Local IP Address ကို ထည့်ကိုထည့်ပေးရပါမယ်။ ဒီလိုဆိုရင် တစ်ရုံးလုံး Internet Connection ရသွားပြီပေါ့။ ဘယ်လောက် အဆင်ပြေသလဲ။ တစ်ရုံးလုံးစာအတွက် Global IP Address တစ်ခုပဲ လိုတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် NAT Server ဆိုတာ ဘယ်လို Server ဆိုတာ နည်းနည်းတော့ သိလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
ပိုပြီး သိလာအောင် ထပ်ပြောပြပါဦးမယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ Network ပေါ်မှာ Data တွေ ဟိုဘက်ဒီဘက် ပို့ကြယူကြတဲ့အခါမှာ ပုံသေပုံစံ(Frame) လေးတွေနဲ့ ပို့ကြယူကြပါတယ်။ ဒါမှ စံတစ်ခုအနေနဲ့ရှိပြီး Computer တွေကြားက ချိတ်ဆက်မှုတွေကို ပိုမိုလွယ်ကူစေမှာပေါ့။ အဲဒီ ပုံစံလေးတွေထဲမှာ မပါမဖြစ်ပါတာက Source IP Address (ပို့သူ/ တောင်းသူလိပ်စာ) နဲ့ Destination IP Address (လက်ခံမယ်သူ / တောင်းဆိုတာကိုပြန်ကြားမယ့်သူ လိပ်စာ) တွေပါမယ်။ ပြီးတော့ Source TCP/UDP Port နဲ့ Destination TCP/UDP Port တို့တွေလည်း ပါပါတယ်။
တစ်ခါတည်း ပြောရဦးမယ်။ NAT ကို အလုပ်လုပ်ပုံပေါ် မူတည်ပြီး Basic NAT နဲ့ PAT ဆိုပြီး Level ခွဲနိုင်ပါတယ်။ Basic NAT ဆိုတာကတော့ ရိုးရိုး Network Address Translation ပါပဲ။ သူက Local Source IP Address တွေကို Internet Connection ပေါ်တက်တဲ့အခါကြရင် Global Source IP Address ဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ ဥုံဖွဆိုပြီး မန်းလိုက်တာတော့ မဟုတ်ဘူးနော်။ သက်ဆိုင်ရာ ISP တစ်ခုကနေ ရယူထားတဲ့ Global IP Address ကို အဲဒီ NAT Server မှာ နဂိုကတည်းက သတ်မှတ်ပေးထားရမှာ။ ဒါမှ သူက ပြောင်းလဲပေးနိုင်မှာ။ သူကိုယ်တိုင်မှာမှ Global IP တစ်ခုမရှိရင်တော့ ဘာမှ လုပ်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကိုတော့ သိထားရမယ်နော်။ ရုံးတွင်း Computer သွားလိုတဲ့နေရာ၊ လိုချင်တာကို အဲဒီ Computer အစား NAT Server က သွားယူပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲ။
Destination IP Address ကတော့ အစောကတည်းက Global IP ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ NAT Server က ဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုတဲ့အတူတူ ဒီတိုင်းကြည့်နေမှာဘဲ။ ခုနက ရုံးတွင်း Computer သွားလိုတဲ့နေရာ၊ လိုချင်တာရှိတဲ့နေရာဆိုတာကလဲ ဒီ Destination IP Address ပိုင်ရှင်ဆိုတော့ NAT Server အနေနဲ့ ဘာမှပြုပြင်ပေးစရာ မလိုဘဲ အဲ့ဒီ Address ကိုသာ ရောက်အောင် သွားပေးမှာပါ။ ကဲ...ကဲ... ဒါက အသွားပိုင်း လိုချင်တာသွားယူတဲ့ အပိုင်းပေါ့နော်။ လိုချင်တာရလို့ ပြန်လာပြီဆိုပါတော့ Network ပေါ်မှာက အသွားဖြစ်ဖြစ်၊ အပြန်ဖြစ်ဖြစ် Data စီးဆင်းမှုတိုင်းက ခုနကပြောခဲ့သလို ပုံစံလေးအတိုင်းသာ စီးဆင်းပါတယ်၊၊ ဒီတော့ သူမှာလည်း Source IP Address တို့ Destination IP Address တို့ ပါဝင်တာပေါ့။ Port တွေ ခဏလေးနေဦးနော်။ သူတို့က PAT နဲ့ ကျမှ ဆိုင်မှာမို့ ခဏလေး။
အဲ...အပြန်လမ်းမှာကျတော့ Source IP Address က Global IP Address ဖြစ်သွားပြီ။ သူက Internet ပေါ်က လာတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်သွားပြီကိုး။ ဒီတော့ NAT Server က သူ့ဆီရောက်လာတဲ့အခါမှာ ဘာမှပြောင်းလဲ ပေးမနေတော့ပါဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်သွားခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အဲ... ဒီတစ်ခါပြုပြင်ပေးရမှာက Destination IP Address ပါ။ သူက Internet ကို ဖြတ်သန်းလာရတဲ့အတွက် Global IP Address နဲ့ လာပါတယ်။ တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ NAT Server မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Global IP Address ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တယ်နော်။ တကယ်လိုချင်တာက NAT Server ကိုယ်တိုင် မဟုတ်ပဲ ရုံးတွင်းက Computer လေးတစ်လုံးဖြစ်ပေမယ့် တကယ်သွားယူတာက NAT Server ဖြစ်နေလို့ ဟိုက ပြန်အကြောင်းကြားတော့ NAT Server လိပ်စာတပ်ပြီး NAT Server ဆီ ရောက်လာတာပါ။ သူ့ဆီရောက်လာတော့ NAT Server က ဒီ Data ကို လိုိုချင်တာ ဘယ်သူဆိုတာ သိပြီးသား ဖြစ်တာနဲ့အညီ အဲဒီရုံးတွင်း Computer လေးရဲ့ လိပ်စာကို ခုနက Destination IP Address မှာ ပြောင်းထည့်ပြီး ဆက်လက် လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ Basic NAT ရဲ့လုပ်ဆောင်ပုံပါ။ ပုံလေးနဲ့ဆိုရင် ပိုမြင်မလားလို့ ပုံဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ နောက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ PAT (Port Address Translation)လာပါပြီ သူက Basic NAT လုပ်ပေးနိုင်တာ အားလုံး လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် Protocol တွေရဲ့ Port Number တွေအထိပါလိုက်ပြီး လိုအပ်ရင် ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Protocol အများစုဟာလည်း ကိုယ်ပိုင် Port Number တွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ICMP (Internet Control Message Protocol) လို Protocol မျိုးတွေကျတော့ ခြွင်းချက်အနေနဲ့ Port Number မရှိပါဘူး။ အဲဒီလို Protocol မျိုးတွေနဲ့ ဆက်သွယ်မှု ပြုကြတဲ့အခါမှာတော့ PAT မလိုဘူးပေါ့ဗျာ။ Port Number တွေမှာလည်း Source TCP/UDP Port Number တွေနဲ့ Destination TCP/UDP Port Number တွေရှိကြပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာတော့ Global တွေ Local တွေရယ်လို့ ခွဲထားတာမရှိပါဘူး။ Protocol တွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့သာ ခွဲခြားသွားတာပါ။
ဟာ...ဒါဆို သူ့ကိုပြောင်းလဲ ပေးနေစရာ လိုသေးလို့လား။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Source IP Address နဲ့ Source TCP/UDP Port Number တွေက အတွဲပုံစံမျိုးတွေပါ။ TCP/UDP Port Number တွေဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာ IP Address ပိုင်ရှင် Computers တွေ အပေါ်မှာသာ ရည်ညွှန်း သက်ရောက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ IP Address ပြောင်းရင် TCP/UDP Port Number တွေဟာလည်း သက်ဆိုင်ရာ IP Address ပိုင်ရှင်အသစ်ပေါ်မှာ ပြောင်းလဲ ရည်ညွှန်းရပြန်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက တန်ဖိုးမပြောင်းပေမယ့် သူတို့ရည်ညွှန်းရာ Computer ပြောင်းလဲပေးရတဲ့သဘောပါ။
ဥပမာပြောရရင် ပထမဦးဆုံး အသွားလမ်းကို ပြန်ကြည့်ရအောင်။ ပထမဆုံး Source TCP/UDP Port Number ဟာ ရုံးတွင်း Computer A ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ အဲ...ဒါပေမယ့် ဒုတိယအဆင့်ရောက်တော့ Source TCP/UDP Port Number ဟာ NAT Server ကို ပြောင်းလဲ ရည်ညွှန်းရပါတယ်။ ဒါကိုပြောတာပါ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ IP Address မပြောင်းမချင်း TCP/UDP Port Number ရည်ညွှန်းချက် ပြောင်းစရာ မလိုဘူး။ IP Address ပြောင်းသွားရင်တော့ TCP/UDP Port Number ရည်ညွှန်းချက်လည်း လိုက်ပြောင်းရမယ် ဆိုတာပါပဲ။ Destination ပိုင်းမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ကဲ...ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ NAT Level နှစ်မျိုးလုံးအကြောင်းကို တော်တော်လေး သဘောပေါက်လောက်ပြီ ထင်ပါတယ်နော်။
သြော်...တစ်ခု ထပ်ပြောပြရဦးမယ်။ NAT Server က Internet Connection ကို Sharing လုပ်ပေးတဲ့ Server အမျိုးအစားတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက Network Traffic ကို မထိန်းနိုင်လို့ပဲ။ အဲ...ကောင်းတာလေးတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ Security ပိုင်းမှာပေါ့။ သူကလုံးဝ Outbound သီးသန့်ပဲဆရာ။ Internal ကနေ External ကို ထွက်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါပေမယ့် External ကနေ Internal ထဲကို လှမ်းဝင်ဖို့ ကြိုးစားတာတို့ Internal ထဲက Resource တွေကို External လှမ်းယူတာမျိုးတို့ကို လုံးဝ လုံးဝ ခွင့်မပြုပါဘူး။ ပြောရရင်တော့ Unidirectional လို့လဲ ပြောလို့ရပါတယ်။
ကဲ...ကဲ... ဘာပဲပြောပြော Global IP Address တစ်ခုလေးနဲ့ Computer များများကို ချိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အသုံးပြုစရာ ရွေးချယ်စရာ Server တွေထဲမှာ NAT Server ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားကြပေါ့ဗျာ...။
14 Re: Network အကြောင်းသိကောင်းစရာများ on 27th September 2009, 11:27 am
Internet traffic တွေကို ပိတ်ဆို့ခြင်းအမျိုးမျိုး
Internet traffic တွေကို ပိတ်ဆို့တဲ့ နည်းလမ်းအများကြီးရှိကျပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ၂ နည်း (သို့ မဟုတ်) ဒီထက်ပိုတဲ့နည်းတွေနဲ့ ပိတ်ဆို့
တတ်ကျပါတယ်။ ဒါကတော့ မိမိသုံးစွဲတဲ့ ISP(Internet Service
Provider)ပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားခြားနားကျပါတယ် ။ Internet Traffic
ဈေးအပေါဆုံးနဲ့အလွယ်အကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ DNS ဆိုတာက Domain
Name System ဖြစ်ပါတယ် ။ အင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့ကွန်ပျူတာတိုင်းမှာ
တစ်ခုတည်းတော့ Address ရှိပါတယ်။ အဲဒီ Address ဟာ ဂဏန်းအားဖြင့် ၄
လုံးရှိပြီး0to 255 ထိဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီ လိပ်စာတွေကို (.)dot
ဖြင့်ခြားထားပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် [url=http://www.goolge.com/]
ရဲ့ address ဟာ 64.233.167.99 ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီတော့
အဲဒီလိပ်စာကိုပိတ်နိုင်ရင် google.com ကိုပိတ်နိုင်ပြီးလေ ။ ဒီတော့ အောက်က
၁။ comand prompt ခေါ်ပြီး C:\_WINDOWS\_system32\_drivers\_etc ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
၂။ အဲဒီမှာ “HOSTS” ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖိုင်ကိုရှာပါ။ တွေ့ ရင်အဲဒါကို Notepad ဖြင့်ဖွင့်လိုက်ပါ။
အဲဒီမှာ 127.0.0.1 localhost ဆိုတဲ့ ဟာကိုရှာပါ ။ ပြီးရင်
မိမိပိတ်လိုတဲ့ဝက်ဆိုက်ကို127.0.0.1 localhost ရဲ့အောက်မှာ ဒီလိုထည့်လို့
မိမိပိတ်လိုသော ၀က်ဆိုက်ကို နံပါတ်လေးတိုးရုံဖြင့်ပိတ်လို့ ရပါတယ် ။
အဲဒီလိုမျိုးဖြင့် Internet Traffic တွေကိုပိတ်တတ်ကျပါတယ်။
Keyword filter နည်းနဲ့လဲပိတ်တတ်ကျပါတယ်။ ဒါကတော့
မိမိရှာတဲ့စကားလုံးကိုပိတ်တာပါ ။ ဆိုပါစို့ .. သင်က အင်တာနက်မှာ
မကောင်းတာကိုရှာမယ်ဆိုရင် အဲဒီမကောင်းတဲ့စာလုံးတွေကို ပိတ်ထားရင် သင်က
အဲဒီစာလုံးနဲ့ ရှာလျှင်လဲ ဘယ်လိုမှတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီနည်းကတော့
rank ကတော့0to 65535 ရှိပါတယ်။ Standard အနေနဲ့ကတော့0to 1024
ရှိပါတယ်။ အဲဒီ port တွေကို သုံးမျိုးအားဖြင့်ခွဲလို့ရပါတယ်။ Well Known
Ports ၊ Registered Ports ၊ Dynamic or Private Ports ဆိုပြီး
ခွဲနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါလင့်မှာ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ် ။
မိမိအသုံးပြုတဲ့ ISP က port တစ်ခုကိုပိတ်လိုက်ရင် အဲဒီ port တစ်ခုလုံးကို
အသုံးပြုနိင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အများဆုံးပိတ်တတ်တာတွေကတော့ port
80,1080,3128,8080 ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီ port တွေက အသုံးများတဲ့
proxy ports တွေဖြစ်လို့ပါပဲ။တကယ်လို့ မိမိအသုံးပြုတဲ့ ISP က ဘယ် port
တွေပိတ်ထားသလဲဆိုတာ အလွယ်တကူစမ်းလို့ ရပါတယ်။ Command Prompt ဖွင့်ပြီး
telnet login.icq.com 80 ဆိုပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။ ဒီနေရာမှာ 80 ဆိုတာ
port နံပါတ်ဖြစ်ပြီး အဲဒီနေရာမှာ မိမိစမ်းလိုသော port ကိုထည့်ပြီး
စမ်းနိုင်ပါတယ်။ command prompt မှာဖွင့်လို့ “timeout” ဖြစ်လို့
ရှိရင်တော့ အဲဒီ port ကိုသင်အသုံးပြုနေတဲ့ ISP ပိတ်ထားတယ်ဆိုတာ
သိနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ အသုံးများတဲ့ port တွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မိမိအသုံးပြုတဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ ပိတ်ဆို့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်ဆုံးမှာ
ကျွန်တော်တင်ပြထားသလိုမျိုးပေါ့။ သာမာန်အားဖြင့်တော့ Internet Traffic
ပိတ်ဆို့ မှုတွေဟာ ISP တို့ အစိုးရတို့ ပိတ်ဆို့တာများပါတယ်။
မိမိသုံးတဲ့ကွန်ပျူတာမှာတော့ ဘယ်သူမှ မိမိဘာသာမပိတ်ကျပါဘူး။ ဒါပေမဲ့
အချို့ ကျောင်း၊ အိမ် ၊ ကုမ္ပဏီတွေမှာ ပိတ်တတ်ကျပါတယ်။ အဲဒါက အများအားဖြင့်
ဆော့ဝဲလ်သုံးပိတ်တတ်ကျပါတယ်။ အောက်မှာ ပိတ်တတ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်အချို့
ဒီဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ် … [url=http://www.netnanny.com/index.html]
ဒီဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ် …
ဒီဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ် … [url=http://www.aol.com/info/parentcontrol.html]
ဒီလင့်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ် ….
Open Source Webfilter ပါ။ Non-commercial သုံးဖို့အတွက် free ပေးထားတာပါ။
free ဆိုတော့ တော်တော်များများအသုံးများကျပါတယ် ။ ဒီကောင်က URL and
keyword Filter အနေနဲ့ပါ proxy လုပ်ပေးပါတယ်။
ဒီလင့်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ် …
15 Re: Network အကြောင်းသိကောင်းစရာများ on 27th September 2009, 11:38 am
16 Peer-to-Peer Network on 15th March 2010, 1:47 am
Peer-to-Peer Network လေးတစ်ခုလောက်တည်ဆောက်ကြည့်ကြရအောင်။ အရင်ဆုံး Peer-to-Peer Network ရဲ့
သဘောသဘာဝလေးကို အပေါ်မှာလည်း ကျနေ်ာ ပြောပြထားပါတယ်။ Peer-to-Peer Network ကို
နောက်တစ်မျိုးခေါ်နိုင်ပါ သေးတယ်။ အဲဒါကတော့ Workgroup Network ပါ။ အဲဒီ Network မျိုးကိုတော့ သာမန်ရုံးတွင်း Computer အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီး Data
တွေဖလှယ်ကြတဲ့နေရာမျိုးမှာ သုံးပါတယ်။ သူတို့မှာ Server လိုစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ Computer မျိုးတွေပါဝင်လေ့မရှိ ပါဘူး။ ပုံမှန်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့
Desktop PC တွေ၊ Laptop တွေ လောက်ပဲပါဝင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အချင်းချင်း Data တွေဖလှယ်ဖို့ အပြင် Command Line က "net send" လို Command မျိုးသုံးပြီး Message
တွေအပြန်အလှန်ပို့ဖို့ရယ် ပြီးတော့ Printer တို့ Hard Disk Space တို့ CD-ROM တို့လို Peripheral Hardware Device တွေကို အချင်ချင်း Share
လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း ဒီ Network မျိုးက အသုံးဝင်ပါတယ်။
Peer-to-Peer Network တစ်ခုချိတ်ဆက်တော့မယ်ဆိုရင် အဓိကအရေးအကြီးဆုံးလိုအပ်တဲ့Device တွေကဘာလဲသိလား မသိသေးရင်မှတ်ထားနော်။ Computer တွေပါပဲ။ ဟဲဟဲ။ Computerတွေတောင်မှ အနည်းဆုံး နှစ်လုံးရှိမှ ဖြစ်မှာပါ။ နို့မို့ဆိုရင် Network ဘယ်လိုလုပ်ပြီးချိတ်မှာလဲ။ အဲဒီတော့ Computer တွေကအရေးအကြီးဆုံး Device
တွေဆိုတာ မဟုတ်ဘူးလား။ အဲနောက် တစ်ခုအရေးအကြီးဆုံးကတော့ Cable တွေရယ် Network Card တွေရယ်ပါပဲ။ တကယ်လို့ Computer နှစ်လုံးတည်း ချိတ်မယ်ဆိုရင် Switch တောင်မလိုသေးပါဘူး။ နှစ်လုံးထက်ပိုသွားပြီ (Printer တို့ဘာတို့ အပါအ၀င်ပေါ့)ဆိုရင်တော့ Switch လိုပါပြီ။ အဲဒီပစ္စည်း တွေ စုံပြီဆိုရင်တော့ Peer-to-Peer
Computer တွေအပိုင်းကတော့ သိပ်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးမပြောတော့ပါဘူး။ Network Card ကလည်းကြိုက် နှစ်သက်ရာ တံဆိပ်ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပါ။ အခုနောက်ပိုင်း
Motherboard တွေမှာဆို LAN Port ဆိုပြီး Network Card Built-in ပါလာ တတ်တာမို့ သိပ်ကိစ္စမရှိပါဘူး။ Cable တွေကတော့ UTP Cat5ဆိုတဲ့ Unshielded Twisted Pair
Cable Category5ကိုသုံးပါမယ်။ Cable အမျိုးအစားအများကြီးထဲမှာ ဈေးနှုန်းအရရော Performance ပိုင်းမှာရော တပ်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းမှာရော အားလုံးမှာ အသင့်တော်
ဆုံးဖြစ်တဲ့အပြင် ဈေးကွက်ထဲမှာ အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ Network Card အများစုနဲ့လည်းCompatible ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ဒီ Cable အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်အသုံးပြုတာပါ။
Switch ကို လည်း မိမိနှစ်သကရာတံဆိပ်ထဲက Ethernet Switch အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပါ။ ကိုယ်တပ်ဆင်မယ့် Computer အရေအတွက်၊ Network တည်ရှိတဲ့ အကျယ်အ၀န်း
အနေအထားကို လိုက်ပြီး 8 ports Switch လား၊ 16 ports Switch လား၊ 8 ports Switchနှစ်ခုလားဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ ကဲအားလုံးစုံပြီဆိုရင် တော့
အဲဒီမှာ Cabling နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ နည်းနည်းထပ်ပြောပြပါဦးမယ်။အိမ်က၀ါယာကြိုးတွေမှာတောင် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားရယူနိုင်ဖို့
ပလပ်ပေါက် တွေတပ်ဆင်ထားရတယ်မဟုတ်လား။ ကိုယ်သုံးမယ့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကထွက်လာတဲ့ကြိုးကိုလည်း အဲဒီပလပ်ပေါက်တွေမှာထိုးနိုင်ဖို့အတွက်3pins လား၊ 2
pins လားစသည်ဖြင့် ပလပ်ပေါက်အမျိုးအစားကို လိုက်ပြီး သင့်တော်တဲ့ပလပ်ခေါင်းတွေတပ်ထားရတယ်လေ။ တကယ်လို့ Original ပလပ်ခေါင်းက
ပလပ်ပေါက်နဲ့မကိုက်ညီဘူး ဆိုရင် ကြားထဲကနေ Converter ခေါင်းတစ်ခုခံထားရတယ်နော်။ဒါမှသူတို့ (ပလပ်ခေါင်းနဲ့ပလပ်ပေါက်) ချိတ်ဆက်မိပြီး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆီကို
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရောက်သွားပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်တော့မှာပေါ့။အဲဒီသဘောပါပဲ။ Network ဆင်မယ့် Cable တွေမှာလည်း
သက်ဆိုင်ရာပလပ်ခေါင်းနဲ့အလားတူတဲ့ Cable ခေါင်းတွေ တပ်ဆင်ထားရပါမယ်။လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေမှာ ပလပ်ခေါင်းကကြိုးရဲ့တစ်ဘက်ထိပ်မှာပဲပါပြီး
ကျန်တဲ့တစ်ဘက်ကတော့ အဲဒီပစ္စည်းတွေထဲမှာပဲ များသောအားဖြင့် အသေတပ်ထားကြတတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် Network Cable တွေမှာတော့ Cable ခေါင်းကို ကြိုးရဲ့
ထိပ်နှစ်ဘက်လုံးမှာ တပ်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Computer ရဲ့ Network Card ကInterface (ပလပ်ပေါက်လိုပေါ့) ဟာ Cable ကို အသေတပ်ဆင်ထားဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
အလွယ်တကူ ဖြုတ်နိုင်တပ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Network Card က Interface နဲ့Ethernet Switch တွေမှာပါတဲ့ Interface တွေကလည်း အတူတူပါပဲ။ ဒါကြောင့် Network
Cable တွေမှာတော့ Switch နဲ့ Computer ကြားက Cable တွေဟာ Cableခေါင်းနှစ်ခုတူညီနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို Switch နဲ့ Computer
ကြားမှာချိတ်ဆက်တဲ့ Cable မျိုး ကို Straight Cable လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီတစ်မျိုးတည်းရှိတာလားဆိုရင်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Cross Cable ကျန်ပါသေးတယ်။
သူ့ကိုတော့ Computer အချင်းချင်းကြား(Computer)နှစ်လုံးတည်းချိတ်တဲ့အခါမျိုးပေါ့)ပြီးတော့ Switch နှစ်လုံးကြားမှာချိတ်ဆက်အသုံးပြုပါတယ်။ (တချို့ Switch တွေမှာတော့ Uplink Port ဆိုပြီး Switch နှစ်လုံးချိတ်ဖို့ သီးသန့် Port ပါတတ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုမျိုးမှာဆိုရင်တော့ Straight Cable နဲ့တင်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ )
အဲဒီ Straight Cable နဲ့ Cross Cable နဲ့က Cable အမျိုးအစားကောခေါင်း(Connector Type) ရောအတူတူပါပဲ။ ဘယ်နေရာမှာ မတူတာလဲဆိုရင်တော့ Cable နဲ့
Connector နဲ့ ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာ မတူတာပါ။ချိတ်ဆက်ပုံချိတ်ဆက်နည်းပေါ့။၀ါယာကြိုးတွေမှာ တပ်ဆင်ရမယ့် ၀ါယာနန်းကြိုးနှစ်မျှင်သာပါတာများပေမယ့် UTP Cat 5
Cable မှာတော့ နန်းကြိုးလေးတွေ ရှစ်မျှင် တောင်ပါပါတယ်။ အဲဒီနန်းကြိုးလေးရှစ်မျှင်ကို Connector မှာ သွားတပ်တဲ့အခါ အစီအစဉ် ထားသို တပ်ဆင်ပုံလေးတွေက
Cross နဲ့ Straight ကို ကွဲပြားသွားစေတာပါ။ တပ်ဆင်ပုံနှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။၀ါယာအစီအစဉ်ပေါ့။ ဖြူစိမ်း၊စိမ်း၊ ဖြူမော်၊ပြာ၊ ဖြူပြာ၊မော်၊ ဖြူညို၊ညို
ဆိုပြီးအစဉ်လိုက်ပုံစံတစ်မျိုးရယ်၊ နောက်တစ်မျိုးကတော့ ဖြူမော်၊မော်၊ဖြူစိမ်း၊ပြာ၊ ဖြူပြာ၊စိမ်း၊ ဖြူညို၊ညို ဆိုပြီးတော့တစ်မျိုးရယ်ပါ။ Cable
ရဲ့ထိပ်နှစ်ဘက်စလုံးကို ပထမပုံစံတစ်မျိုးတည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ဒုတိယပုံစံတစ်မျိုးတည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် စီစဉ်ပြီး Connector နဲ့ ချိတ်ဆက်
ထားမယ်ဆိုရင် အဲဒီ Cable ဟာ Straight Cable ပါ။ တကယ်လို့အဲလိုမဟုတ်ဘဲ Cableရဲ့တစ်ဘက်ထိပ်မှာ ပထမပုံစံအတိုင်းစီစဉ်ပြီး နောက်တစ်ဘက်ထိပ်မှာတော့
ဒုတိယပုံစံအတိုင်း စီစဉ်ထားမယ်ဆိုရင် အဲဒီ Cable ဟာ Cross Cable ပါ။မှတ်မိသွားအောင် အောက် မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ပြထားပါတယ်။
သြော်အရေးကြီးတာပြောရဦးမယ်။ UTP Cable မှာတပ်ဆင်ရမယ့် Connector က RJ 45
Connector ပါ။ တခြား Connector နဲ့ ချိတ်ဆက်လို့ရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကဲ Cable တွေကို လိုအပ်သလို လိုအပ်သလောက် အကွာအဝေး အတိုင်းအတာလေးတွေ ဖြတ်ပြီးထိပ်တွေမှာ RJ 45 Connector လေးတွေတပ်ဆင်ထားလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ Switchတစ်လုံးနဲ့ပဲ ချိတ်ပြမှာဆိုတော့ Cross Cable မလိုပါဘူး။ အားလုံးကို Straight Cable နဲ့ပဲချိတ်ပြမှာပါ။ Switch နဲ့ စက်တစ်လုံးစီတိုင်းကို Straight Cable
တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးသွယ်တန်းမှုအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ သြော်မေ့လို့ Switch တွေကို Power ပေးဖို့တော့
မမေ့နဲ့ဦးနော်။ ကြိုးတွေ သွယ်တန်းပြီး Computer တွေဖွင့်လိုက်ရုံနဲ့ကြိုးသွယ်တန်းမှု မပြီးသေးပါဘူး။ Switch ကိုလဲ Power ပေးပြီး ဖွင့်ပေးရပါဦး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Computer တွေအားလုံးဟာ Windows XP Professional OS တွေတင်ထားတယ်လို့ ယူဆလိုက်မယ်နော်။ Windows XP က Network Card ကို Detect သိလား
မသိဘူးလားဆိုတာကို အရင်ကြည့်ပါ။ My Network Place ကို Right Click နှိပ် ပြီးProperties ကို ရွေးပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့စက်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Network
Card တွေကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့စက်မှာ Network Card စိုက်ထားပါရဲ့နဲ့အဲဒီမှာမတွေ့ရဘူးဆိုရင်တော့ Windows XP က Card ကို Detect မသိလို့ပါ။
ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မ လဲ။ စိတ်မပူသွားပါနဲ့။ Network Card က Motherboard မှာbuilt-in ပါတဲ့ Card ဆိုရင် Motherboard Driver ခွေကို ထည့်ပြီး Network Card
ကို Install လုပ်ပါ။ သီးသန့်ထပ်စိုက်ထားတဲ့ Network Card ဆိုရင်လည်း Cardoယ်တုန်းကပါလာတဲ့ Driver ခွေကို ထည့်ပြီး Install လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ My Computer ကို Right Click နှိပ်ပြီး Properties ကို ခေါ်ပါ။ပြီးရင် Hardware Tab အောက်က Device Manager ထဲကိုသွားပါ။ အဲဒီမှာ My Computer
Nodes ကို Right Click နှိပ်ပြီး Scanning Plug And Play Hardware ကိုနှိပ်ပါ။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ အဲဒီမှာတင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ Ethernet Controller ဆိုပြီး
တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို Right Click နှိပ်ပြီး Update Driver ကိုနှိပ်ပါ။ပြီးရင် Driver Location တောင်းရင် CD ကို ညွှန်းပြီး Install လုပ်လိုက်ပါ။
သူ့ဟာသူ Driver ရှာပြီး Card ကို Install လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုလုပ်လို့အောင်မြင်သွားရင်တော့ My Network Place ရဲ့ Properties ထဲမှာ Local Area
Connection ဆိုပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ နှစ်ကဒ်ဆိုရင် Local Area Connection 1 ,Local Area Connection2ဆိုပြီးအစဉ် လိုက်ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီထဲကမှကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကဒ်ကို Double Click နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Properties
ပြီးရင် Internet Protocol (TCP/IP) ကို Select မှတ်ပြီး Propertiesကိုနှိပ်ပါ။ အဲဒီမှာ IP Address ပေးရပါမယ်။ Network တစ်ခုလုံးကို Same Network
ဖြစ်နေအောင် IP Address ပေးရပါမယ်။ (ဥပမာ 192.168.0.x ပေါ့) ပြီးလို့ Tabနှိပ်လိုက်တာနဲ့ Subnet Mask က Auto ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်
Network တစ်ခုလုံးမှာ တပ်ဆင်ပါဝင်မယ့် စက်တွေအားလုံးကို အဲဒီနည်း နဲ့ IP Address တွေသတ်မှတ်ပါ။ အားလုံးပြီးသွားရင် ipconfig (Command Line Command)
ကိုသုံးပြီး IP Address ကိုစစ်ကြည့်ပါ။ ဟိုဖက်ဒီဖက် Computer အချင်းချင်းConnection မိသလား မမိဘူးလား သိရအောင် ping (Command Line Command )
ကိုသုံးပြီး အပြန်အလှန်စမ်းကြည့်ပါ။ အောင်မြင်တယ်ဆိုရင်ပြီးတာပါပဲ။
ကျန်တဲ့အဆင့်တွေကို ဆက်လုပ်ပါ။ ဆက်လုပ်ရမှာက My Computer ကို Right Click
နှိပ်ပြီး Properties ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Computer Name Tab အောက်ကိုလာပါ။
ပြီးရင် Change ကိုနှိပ်ပါ။ အဲဒီမှာ Computer Name နဲ့ Workgroup Name ပေးပါ။
Computer Name ကတော့ တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံးမတူရပါဘူး။ Workgroup Name ကတော့
အားလုံးအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ Name ကိုပဲပေးရမှာပါ။ ပြီးရင် OK နှိပ်ပါ။ ခဏ
စောင့်ပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေရင် "Welcome from the Workgroup" ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ပြီးရင် စက်ကို Restart ချရပါလိမ့်မယ်။ စက်ပြန်တက်လာရင် Workgroup Network
တစ်ခုဒါမှမဟုတ် Peer-to-Peer Network တစ်ခုချိတ်လို့ပြီးသွားပါပြီ။
ပြီးရင် Workgroup ထဲမှာ (Network ထဲမှာပေါ့နော်) တပ်ဆင်ထားတဲ့စက်တွေမှာ
အသုံးပြုမယ့်လူတွေရဲ့ User Name တွေနဲ့ Password တွေကို သက်ဆိုင်ရာ
စက်အသီးသီးမှာ သက်ဆိုင်ရာ လူတွေအတွက် Configure လုပ်ပေးပါ။ My Computer ကို
Right Click နှိပ်ပြီး Manage လို့ပြောပါ။ Computer Management Console
အဲဒီထဲကမှ Local Users and Groups Nodes ကို Select မှတ်ပြီး သူ့ဘေးက (+) ကို
နှိပ်ပါ။ အဲဒီထဲကမှ Users Nodes ကို Right Click နှိပ်ပြီး New User
Username ပေးပါ။ Full Name နဲ့ Description က Optional ပါ။ မထည့်လဲ ရပါတယ်။
Password ပေးပါ။ Confirm Password ပေးပါ။ User must change password at next
log on ဘေးက Check Box ကို ဖြုတ်ပါ။ မဟုတ်ရင်နောက်တစ်ခါ အဲဒီ User Log on
၀င်တဲ့အခါ Password ကုိ ပြောင်းပေးကိုပေးရပါလိမ့်မယ်။ အောက်က Check Box
တွေကိုတော့ မိမိလိုအပ်ချက်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး On ချင်ရင် On ပေးပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီအတိုင်းထားခဲ့ပါမယ်။ ပြီးရင် Create ကိုနှိပ်ပါ။
User တစ်ယောက် Create လုပ်ပြီးပါပြီ။ Users Folder အောက်မှာ ကိုယ်ခုနက create
လုပ်ခဲ့တဲ့ User လေးအတွက် သူ့ရဲ့ User Name နဲ့ Folder လေးလည်း ရောက်နေတာကို
တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုပဲ ကျန်တဲ့စက်တွေမှာလည်း သက်ဆိုင်ရာ User တွေအတွက်
Configured လုပ်ပေးလိုက် ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Workgroup Network
(သို့မဟုတ်) Peer-to-Peer Network တစ်ခုချိတ်ဆက်မှုဟာ အမှန်တကယ် ပြီးဆုံးပါပြီ။
17 Re: Network အကြောင်းသိကောင်းစရာများ